အခုချိန်မှာ နွမ်းပါးသွားပြီလေ ..... ။
ဖုံးသတ်ခဲ့တယ်လေ ... မမေ့နိုင်စရာကောင်းတဲ့
မျက်ရည်တွေ ဝေ့၀ဲလာတယ် ... ။
တယ်ခက်နေပြီ လေ ...
ငါ့ကိုသနားပါလို့ ဆုတောင်းနေမိတယ် ....
အိမ်ပြန်ချင်လို့လေ ......... ။
လယ်ထွန်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေ .... ။
အော်.. နာဂစ်ရယ် ။
အကြောင်းအရာ ။ ။ နာဂစ်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ လူထုဒုက္ခကို ကူညီပေးခဲ့သော ပြည်ပမှစေတနာရှင် လူမျိုးခြားများ နှင့် နိုင်ငံတွင်းမှ ရပ်မိရပ်ဖများ Company အဖွဲ့များ ၊ UNICF ( ယူနီဆက်(စ်) )၊
Save The Children ( စေ့သည်ချဲထရင့် ) ၊ ကြက်ခြေနီ ၊ အစရှိတဲ့ အသင်းအဖွဲ့များကို ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း
ဧရာဝတီတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းမှ ပြည်သူတွေကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ကြောင်း နာဂစ်တစ်နှစ်ပြည့်တွင်
Posted by mhyaw lint at 9:08 AM
နာကျင်လေတတ် မထင်မှတ်သင့် ။
သမားတို့ပင် မကုနိုင် ၊၊
ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တာနဲ့ တင်လိုက်တာပါ .....
Posted by mhyaw lint at 6:27 AM
ဆရာမလုပ်နဲ့တဲ့ . . .
ငါ့ရင်ခုန်သံကို သနားလို့ပါ ...
မပြောပလောက်ပါဘူးချစ်သူ . . . ။
Posted by mhyaw lint at 6:28 AM
အမှန်တော့ နင်လဲအရှုံးငါလဲအရှုံးပေါ့ . . . ။
ငါ့ဘ၀ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့တယ် . . .
မင်းလေသံအောက်မှာ ကျပျောက်ခဲ့တယ်ချစ်သူ . . . ။
ငါ .. .. မင်းနဲ့စကားနိုင်လုပြောဖို့
အမြတ်ထုတ်ချင်ရတာလဲချစ်သူရယ် ... ။
လှည့်ကြည့်သင့်ပါတယ် ချစ်သူ . . .
သနားလိုက်ပါချစ်သူရယ် . . .
ငါနှလုံးသားပါ ...... ။
မယုံလို့ Lesson ပေးမယ်တော့မကြံလိုက်ပါနဲ့
၀ါကျတစ်ကြောင်းဖွင့်ဟခဲ့တာပါ . . . ။
Posted by mhyaw lint at 3:57 AM